भारत सारा छिमेकमा फेल भयो : एसडी मुनि - Nepali News Nepal
मे 23, 2020 मे 23, 2020 Bishwa Ghatana0Comments एस डि मुनि, नेपाल भारत, सिमा विवाद, सिमानाका
९ जेठ २०७७ काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न बिबाद पछि भारतीय मिडियाले जतिसुकै चर्को–चर्को कुरा गरे पनि नेपालको मामिला बुझ्ने कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकचाहिँ निकै अत्तालिएको पाइएको छ ।
नेपालको मामिलाका जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी भनिने एसडी मुनिले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन, सारा छिमेकमा भारत फेल भइरहेको स्वीकारेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि नेपालबाट नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतका लागि चुनौती सिर्जना भएको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताएका छन् ।
नेपालको मामिलामा नरमरुपमा प्रस्तुत भएता पनि दुबैले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको एकैस्वरमा आरोप लगाएका छन् ।
भारतीय पत्रकार मनोज मनुको ‘एडिचर च्वाइस’ कार्यक्रममा उनीहरुले दिएको प्रतिक्रियाको अंश भारतको धारणा बुझ्नलाई सहयोगी हुने ठानेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दैछ !
एसडी मुनिले भने, ‘चीनको जुन प्रभाव बढिरहेको छ, जो एक वास्तविकता हो । यो सिर्फ नेपालमा मात्रै बढिरहेको छैन । हाम्रो चारैतिर बढिरहेको छ । श्रीलंकामा, म्यानमारमा, बंगलादेशमा, पाकिस्तानमा, मालदिभ्समा । कहाँ बढिरहेको छैन ? सारा एशियामा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । यो भारतका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । र, यो चुनौती नेपालबाट कैयौं ज्यादा बढी छ ।’
छिमेकि सबै चिढिए !
मुनिले भने, ‘कहीँ न कहीँ हामी सारा छिमेकमा फेल भइरहेका छौं । हेर्नुहोस् श्रीलंकामा स्थिति बदलियो । राजापाक्षे पहिले राष्ट्रपति थिए, उनी दोस्रोपटक आए । जुन संयुक्त सरकार त्यहाँ बनेको थियो, यसको सहानुभूति भारतका लागि थियो, त्यो चाँडै खत्तम भयो । मालदिभ्समा सत्ता परिवर्तन भएको छ र हालत केही ठीक छ ।
बंगलादेशमा पनि आमरुपमा मानिसहरु, स्वयं हसिनाले भनेकी छिन् हाम्रो ( भारतको) घरेलु नीतिले बंगलादेशमाथि असर पर्छ । नेसनल रजिस्टर्डको हामी कुरा गरिरहेका छौं, यसबाट बंगलादेशी जनता हैरान छन् । मुसलमानको हामी कुरा गर्छौं, बंगलादेशी जनता हैरान छन् । यी सबै नीतिहरुको असर पर्छ ।
तब म यही भन्छु कि समग्ररुपमा बस्नुपर्छ । किनकि हाम्रा छिमेकी यस्ता छन् कि कतिपय मानेमा आर्टिफिसियल छन्, हामी सब एकै थियौं, जहाँ राजनीतिक सीमा वीचमा पर्‍यो र हामी अलग भयौं । अलग पहिचान भयो । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका जनता त एकै थिए ।
नेपालमा सम्बन्धमा पनि यति गहिरो सम्बन्ध थियो हाम्रो । श्रीलंकासँग शदिऔंको हाम्रो सम्बन्ध हो । त्यसर्थ यो सबैलाई हेर्दै यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि हामीले आफ्नो नीति चाहे घरेलु होस्, जसको असर छिमेकीमा पनि पर्छ, चाहे त्यो विदेश नीति, चीनप्रति होस् या पाकिस्तानप्रति, त्यसको पनि असर पर्छ ।
हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यको कुरा हो कि छिमेकमा जुन राष्ट्रवाद छ, त्यो भारतको विरुद्धमा छ ।’
← भ्रष्टाचारीलाई अब १४ वर्ष सम्म कैद !
थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण, नेपालमा ५४८ संक्रमित →
मे 29, 2020 मे 29, 2020 Bishwa Ghatana 0
कालापानीको विवादमा चीनले भन्यो : यो समस्या नेपाल र भारतको हो
मे 19, 2020 मे 19, 2020 Bishwa Ghatana 0